﻿	လွယ်ကူသောသကြားကွတ်ကီးများ - အားလပ်ရက်များ
မုန့်ဒိန်ခဲနှင့်အတူလွယ်ကူသော chip ကိုသို့ကျဆင်းလာ
cheddars ပန်းဂေါ်ဖီစိမ်းဆန်ဆန် casserole စာရွက်
ဤသကြား cookie ချက်ပြုတ်နည်းသည်ပြီးပြည့်စုံသောတစ်နှစ်ပတ်လုံးအားလပ်ရက် cookie ဖြစ်သည်။ ရိုးရှင်းသောထောပတ်၊ သကြားနှင့်ဂျုံမှုန့် (အနည်းငယ်ထည့်သွင်းမှုများ) အရဤသကြားကွတ်ကီးများသည်အချိန်တိုင်းလှပသည်။
ပါဝင်ပစ္စည်းများအပေါ်တိုပေမယ့်သူတို့အဆင်ပြေအောင်, ပုံ, ဒါမှမဟုတ်အလှဆင်နိုင်နည်းလမ်းများစွာ၏ရှည်လျား!
နာရီအနည်းငယ်အဘို့အ Chilling မုန့်စိမ်း။ လှိမ့်ခြင်းနှင့်ဖြတ် cookie ကိုခုတ် သင့်ရဲ့အခါသမယကိုက်ညီရန်!
သူတို့ကအရမ်းပေါ့ပေါ့တန်တန်အစွန်းပေါ်အညိုရောင်သည်အထိရုံမုန့်ဖုတ်သောအခါသကြား cookies တွေကိုအကောင်းဆုံးကြည့်ရှုပါ။
သကြား cookie မုန့်စိမ်းကိုမကျော်ပါနှင့် ။ ၎င်းသည်ထောပတ်ကိုအနည်းငယ်ပိုမိုခိုင်မာစေပြီး၎င်းသည် cookies များကိုအလွန်ပြန့်နှံ့။ ပြန့်ကျဲနေခြင်းမှကာကွယ်ရန်ဖြစ်သည်။ အအေးခံခြင်းကသူတို့ကိုကောင်းမွန်စွာဖုတ်နိုင်သည်။
ပါဝင်ပစ္စည်းများမှာဖြစ်သင့်သည် အခန်းအပူချိန် အစမပြုမီ (ထောပတ်နှင့်ကြက်ဥအပါအ ၀ င်) ။
တကယ်ပဲ အရေးကြီးတယ် သော ဂျုံမှုန့်ကိုမှန်ကန်စွာတိုင်းတာသည် ။ ဂျုံမှုန့်ကိုတိုင်းတာသည့်ခွက်ဖြင့်မသောက်ပါနှင့်သို့မဟုတ်မုန့်ညက်ခြောက်သွေ့စေသောမုန့်ညက်ကိုထုပ်ပိုးမထားပါနှင့်။ ပေါ့ပေါ့တန်တန်အတိုင်းအတာသို့ဂျုံမှုန့်ဇွန်းနှင့်အဆင့်တူ။
သင်၏ထောပတ်တံဆိပ်ကိုစစ်ဆေးပါ၊ အချို့သောကုန်အမှတ်တံဆိပ်အဆီများတွင်ရေသို့မဟုတ်အခြား cookies များပါ ၀ င်သည်။
မုန့်စိမ်းကိုလှိမ့်ပါ 1/4″ မှအထူရှိသောကြောင့်ကောင်းမွန်စွာဖုတ်နိုင်သည်။ မုန့်စိမ်းကိုလှိမ့်သောအခါပျော့လွန်းလျှင်ရေခဲသေတ္တာထဲတွင်မိနစ်အနည်းငယ်ထားပါ။
ကျော်သွားမသွားပါနဲ့ မုန့်စိမ်းကိုအေးစေခြင်း (သို့) သင်၏ကွတ်ကီးများပျံ့နှံ့သွားပြီးသူတို့၏ပုံသဏ္ဌာန်ကိုထိန်းသိမ်းထားလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။
အသုတ်တွင်မုန့်ဖုတ်ပါကပူနွေးသော cookie စာရွက်ပေါ်တွင်သစ်သီးသစ်များကိုမထည့်ပါနှင့်။ ဤသည်မုန့်စိမ်းကိုပြန့်နှံ့စေပါလိမ့်မယ်။
ထုတ်ယူခြင်းကိုရောနှောခြင်းဖြင့်မုန့်စိမ်းကိုရောမွှေပါ။ ခရစ်စမတ်မှာငရုတ်သီးအနည်းငယ်အတွက် vanilla extract ကိုလဲလှယ်လိုက်ပါ။ သစ်တစ်ခုအရသာအဘို့အဗာဒံသီးသို့မဟုတ်သံပုရာထုတ်ယူထည့်ပါ။
သကြားကွတ်ကီးများသည်အလှဆင်ခြင်းအတွက်လူကြိုက်အများဆုံး cookie ချက်ပြုတ်နည်းများဖြစ်သည်။ ကွတ်ကီးနှိပ်စက်များ၊ တံဆိပ်ခတ်ထားသည့်တံသင်တံဆိပ်များ (သို့) ၎င်းတို့ကိုစက်ဝိုင်းများဖြင့်ခုတ်ထွင်လိုက်ရုံဖြင့်ပျော်ရွှင်စွာနေပါ။
ခရစ်စမတ်သကြားကွတ်ကီးများပြုလုပ်ရန် (သို့) နှစ်အလိုက်ဖြတ်တောက်ထားသောကွတ်ကီးများပြုလုပ်ရန်သူတို့သည်အလှဆင်ခြင်းမပြုမီအအေးခံရန်သေချာသည် (သို့မဟုတ် icing အရည်ပျော်သွားလိမ့်မည်) ။
နူးညံ့သောနှင်းခဲနှင့်အလှဆင်နိုင်သော်လည်းငါတို့အကြိုက်ဆုံးသည်ရိုးရှင်းစွာအသုံးပြုရန်ဖြစ်သည် သကြား cookie ကို icing ကြောင်းတောက်ပခြင်းနှင့်ကုမ္ပဏီတစ်ခုကပြီးအောင်။
အိမ်လုပ်သကြားကွတ်ကီးများသည်မုန့်ဖုတ်ရောင်းအားနှင့်ကွတ်ကီးအပြန်အလှန်လဲလှယ်မှုများအတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်၊ မုန့်ဖုတ်ရောင်းရန်အတွက်ကျွန်ုပ်နှစ်သက်သောလွယ်ကူသော cookie ချက်ပြုတ်နည်းများမှာ -
လွယ်ကူသော Shortbread ကွတ်ကီးများ (Cookie Press) - လူတိုင်းသည်ဤလှပသော cookies များကိုနှစ်သက်ကြသည်
Eggnog ကွတ်ကီးများ - mmm, eggnog!
မက္ကဆီကန်မင်္ဂလာဆောင်ကွတ်ကီး - snowball cookies များသည်အမြဲတမ်းထိခိုက်နစ်နာသည်
ချောကလက် Crinkle ကွတ်ကီး - ချောကလက်နှင့်ပိုချောကလက်
ပြီးပြည့်စုံသောချောကလက် Chip Cookies - လုံးဝပြီးပြည့်စုံတယ်။
သကြားလုံးကြံကွတ်ကီးများ - ကြည်ညိုဘွယ်ကောင်းသောနှင့်ပွဲလမ်းသဘင်!
ပြင်ဆင်ချိန်ဆယ့်ငါး မိနစ်များ ချက်ပြုတ်ချိန်၉ မိနစ်များ ချမ်းအေးချိန်၄ နာရီ စုစုပေါင်းအချိန်၄ နာရီ ၂၄ မိနစ်များ ဝန်ဆောင်မှု၄၈ ကွတ်ကီးများ စာရေးသူHolly Nilsson လွယ်ကူသောသကြားကွတ်ကီးများမုန့်ဖုတ်ခြင်း၊ မိသားစုများ၊ သူငယ်ချင်းများနှင့်အလှဆင်ခြင်းကဲ့သို့သောတစ်နှစ်ပတ်လုံးအားလပ်ရက်အားလပ်ရက်ပျော်စရာအဘယ်အရာမျှမရှိပါ။ ပုံနှိပ်ပါ ပင်
▢၁ ခွက် unsalted ထောပတ် အခန်းအပူချိန်ပျော့
▢၁ ကြက်ဥကြီး အခန်းအပူချိန်
▢၃ ခွက် အားလုံးရည်ရွယ်ချက်မုန့်ညက် * မှတ်စုကိုကြည့်ပါ
▢1 ¼ လက်ဖက်ရည်ဇွန်း မုန့်ဖုတ်ဆော်ဒါမှုန့်
▢¼ လက်ဖက်ရည်ဇွန်း ဆားငန်
ထောပတ်နှင့်သကြားကိုပန်းကန်လုံးထဲသို့ပေါင်းပြီးအလယ်အလတ်တွင်ရောစပ်။ ရောစပ်ပါ။ ၃-၄ မိနစ်ခန့်ကြာသည်။
ကြက်ဥနှင့် vanilla ထည့်ပါ။ ကောင်းစွာပေါင်းစပ်ချောမွေ့သည်အထိရောမွှေပါ။
မုန့်စိမ်းကိုတစ်ဝက်ပိုင်း ခွဲ၍ ပလပ်စတစ်ဖြင့်ဖုံးအုပ်ပြီး ၄ နာရီ (သို့) တစ်ညအေးပါ။
375 ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်မှမီးဖို Preheat ။ မီးဖိုသည်အပူဖြစ်နေစဉ်ရေခဲသေတ္တာမှမုန့်စိမ်းကိုဖယ်ရှားပါ။
သကြားသို့မဟုတ်ဂျုံမှုန့်အနည်းငယ်ဖြင့်မျက်နှာပြင်ကိုဖြန်းပါ။ ထို့ကြောင့်မုန့်စိမ်းမကပ်ပါ။ မုန့်စိမ်းကို thickness အထူသို့လှိမ့်ပါ (သင်သိပ်သည်းမနေစေလိုပါ) နှင့်လိုချင်သောပုံစံများကိုဖြတ်ပါ။
ကွတ်ကီးများ ၁ 'ကိုသီးခြားစီမထားပါနှင့် ၈-၁၀ မိနစ်ခန့်ဖုတ်ရမည်။
ကွတ်ကီးစာရွက်ပေါ်တွင် ၂ မိနစ်ခန့်အေးအေးဆေးဆေး၊ အအေးခံစင်သို့ပြောင်းပြီးအလှဆင်ခြင်းမပြုမီလုံးဝအအေးခံပါ။
ပြီးတာနဲ့အအေးနှင့်အတူအလှဆင် သကြား cookie ကို icing ။
တိုင်းတာသောအရာ: ဒါဟာအရေးကြီးပါတယ် ဂျုံမှုန့်ကိုကောင်းစွာတိုင်းတာသည် ။ ဂျုံမှုန့်ကိုတိုင်းတာရန်အတွက်၎င်းကိုတိုင်းတာသောဖလားထဲသို့အလွယ်တကူဇွန်း ချ၍ အဆင့်ညှိပါ။ ဂျုံမှုန့်ကိုခွက်ထဲထည့်ပြီးမုန့်ညက်ခြောက်သွားအောင်တိုင်းတာတဲ့ခွက်ကိုမသုံးပါနဲ့။ ပါဝင်ပစ္စည်းများ: ပါဝင်ပစ္စည်းများအားလုံးသည်အခန်းအပူချိန်ရှိကြောင်းသေချာစေရန်နှင့်ထောပတ်ကိုအစမပြုမီအခန်းအပူချိန်လျှော့ချပါစေ။ (မိုက်ခရိုဝေ့ဖ်တွင်ထောပတ်ကိုပျော့ပြောင်းရန်ကျွန်ုပ်မအကြံပြုပါ။ ) ကျွန်တော်သုံးချင်ပါတယ် ရှင်းလင်းသော vanilla ထုတ်ယူ , သင်မကြာခဏအွန်လိုင်းသို့မဟုတ်ယာဉ်စတိုးဆိုင်များတွင်ရှာတွေ့နိုင်ပါသည်။ မည်သည့် vanilla မဆိုဤစာရွက်တွင်အလုပ်လုပ်ပါလိမ့်မည်။ ရိုက်နှက်သည် - creamy နှင့်ချောမွေ့သည်အထိထောပတ်နှင့်သကြားရိုက်တယ်။ ကြက်ဥထည့်ပြီးတာနဲ့သူကထည့်သွင်းခြင်းနှင့်အရောအနှောချောမွေ့ကြည့်သည်အထိရိုက်ဆက်လက်။ မုန့်ညက်ထည့်သွင်းခြင်းနှင့်မုန့်ညက်ထည့်သွင်းသည်အထိရုံရိုက်တယ်။
သော့ချက်စာလုံးရှင်းပြီသကြား cookies တွေကို, သကြား cookies တွေကို သင်တန်းကွတ်ကီး၊ အချိုပွဲ ချက်ပြုတ်ခဲ့သည်အမေရိကန်© SpendWithPennies.com ပါဝင်သည့်အကြောင်းအရာများနှင့်ဓာတ်ပုံများသည်မူပိုင်ခွင့်နှင့်ကာကွယ်ထားသည်။ ဤစာရွက်ကိုမျှဝေခြင်းကိုအားပေးပြီးတန်ဖိုးထားသည်။ မည်သည့်ဆိုရှယ်မီဒီယာကိုမဆိုချက်ချင်းကူးယူခြင်းနှင့် / သို့မဟုတ်ကူးယူခြင်းများကိုလုံးဝတားမြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်၏ဓာတ်ပုံအသုံးပြုမှုမူဝါဒကိုဒီမှာကြည့်ပါ ။